फेसबुक आफैंले गरिदियो स्व‍. प्रकाशको एकाउन्ट परिवर्तन
काठमाडौं- फेसबुकले आइतवार निधन भएका प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको फेसबुक आफै परिवर्तन गरिदिएको छ । फेसबुकले दाहालको फेसबुकमा अहिले उनको प्रोफाइलको नाम माथि ‘Remembering’ भन्ने शब्द हालिदिएको छ जुन मृत्यु भईसकेको मानिसको फेसबुकको एकाउन्टमा आफै देखिन्छ । साथै उनको प्रोफाइल माथि फेसबुकले ‘Remembering Prakash Dahal’देखिएको छ । जहाँ (We hope people who love Prakash will find comfort in visiting his profile to remember and celebrate his life.) भन्ने संदेश देखाएको छ । फेसबुकले प्रयोगकर्ताको मृत्यु भईसकेपछि उसको एकाउन्टलाई आफै ‘memorialized accounts’ को रुपमा परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा यस कुराले प्रमाणित गरेको छ । प्रकाशको मृत्युको खबर कसरी पायो फेसबुकले ? विश्वमा झन्डै आधा जनशंख्याले फेसबुक चलाउँछन् । ति मध्ये दैनिक हजारौंको मृत्यु भईरहेको हुन्छ । फेसबुक आफैले जो(जो प्रयोगकर्ता मर्छन, सबैको एकाउन्ट परिवर्तन गर्न भने सक्दैन । तर जो व्यक्ति मर्छ र उसलाई समवेदना भन्दै उसको फोटो सेयर गर्ने तथा फेसबुक मार्फत दुस्ख व्यक्त भएपछी फेसबुकले त्यस्ता व्यक्तिको एकाउन्टलाई ‘memorialized accounts’ को रुपमा परिवर्तन गरिदिन्छ । प्रकाशको फेसबुक एकाउन्ट पनि यस्तै भएको हुनसक्छ । आइतबार मृत्यु भएका प्रकाश दाहालको फोटोहरु सामाजिक संजालमा हजारौं(लाखौँले श्रद्धान्जली दिंदै पोष्ट गरेको कारण पनि फेसबुकले उनको मृत्यु भएको भन्ने बुझेर उनको फेसबुक परिवर्तन गरेको हुन सक्छ । लगातार फेसबुकमा प्रकाश दाहालको फोटो हाल्दै उनको मृत्युबारे पोष्टहरु सेयर गरिएका थिए । माथिको
चुनावकाे मुखैमा अमेरिकी विशेष विमान किन घुम्दैछ नेपाली आकाशमा ?
२ मंसिर, काठमाडौं । ललितपुरको भट्टेडाँडामा तयार गरिएका दुई वटा राडारसहित देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उड्ययन सम्बद्ध उपकरणहरुको परीक्षण शनिबारबाट सुरु भएको छ । अमेरिकाबाट आएको विशेष विमान र अमेरिकी तथा जापानी प्राविधिक टोलीले यस्तो परीक्ष्ण सुरु गरेका हुन् । यसका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य केही महत्वपूर्ण विमानस्थलमा पनि उडान/अवतरण प्रभावित भएको छ । तालिकाभन्दा ढिला गरी उडान भएपछि विभिन्न गन्तव्यमा हिँडेका यात्रु लामो समय विमानस्थलमा रोकिएका छन् । अब आइतबार र सोमबार पनि उडान/अवतरण केही नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । हवाई उडानलाई सुरक्षित गराउने गरी नयाँ राडार जडान गरिएको हो । नयाँ राडार र उड्डयनसम्बद्ध उपकरणको परीक्षण गर्न अमेरिकाको फेडरल एभिएसन एडमिनिट्रेसन विशेष जहाजसहितको ६ जनाको टोली नेपाल आएको छ । जापानबाट पनि ४ जनाको प्राविधिक टोली आएको छ । यसैबाट नयाँ राडरसहित देशभरका उड्डयन उपकारण र सिस्टमहरुको क्यालिब्रेसन गरिनेछ । सँगै देशभरका हवाई उडान सम्बन्धी विभिन्न उपकारणहरुको कार्यदक्षताबारे पनि अध्ययन हुने भएको छ । यो विमान विभिन्न विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यहाँ अतरण र उडान गर्दै उपकरण र सिस्टमहरुको परीक्षण गर्नेछ । प्राविधिक टोलीले सुरक्षाका हिसाबले कुन विमानस्थलको उपकरणहरु कुन हालतमा छन् भनेर रिपोर्ट पनि दिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए । नेपालमा हुने हवाई दुर्घटना घटाउन नयाँ राडार सहयोगी हुने विश्वास छ । जापानी
काठमाडौं, कात्तिक २७ – ‘मेरो श्रीमानलाई कसरी जीवित बनाउने होला ?’ पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र दराजबाट निकाल्दै सन्तोषीले सोधिन् । श्रीमतीको प्रश्न सुनेर छेवैमा बसेका उनका श्रीमान् सुवास तामाङ मुस्कुराए । सुवास जीवित छन्, त्यसैले मुस्काउँछन्, तर कानूनी रुपमा उनी मरिसकेका छन् । त्यसैले उनको साथमा आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र पनि छ । पतिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र हातमा बोक्ने महिलामध्ये सन्तोषी त्यस्तो भाग्यमानी महिला हुन्, जसको साथमा श्रीमानको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र सँगै सुखदुःखमा साथ दिने श्रीमान् पनि छन् । साउदी र नेपाल सरकारबाट मृत्यु भइसकेको प्रमाणपत्र पाएका उनका श्रीमान् अब कानूनी रुपमा कसरी जीवित होलान त ? सन्तोषी मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दै छक्क पर्छिन् । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको लक्ष्मीमार्गकी सन्तोषी तामाङको प्रश्न सुन्दा जसलाई पनि अचम्म लाग्छ, तर प्रश्नभन्दा धेरै अचम्मलाग्दा अनुभव भोग्दै सन्तोषीको जिन्दगीको रथ पनि अघि बढ्दैछ । कमाउन गएका श्रीमान् गुमाउनु, विधुवा हुनु, फेरि त्यही श्रीमान् जीवित भएर फर्किदाका उनका भोगाइ एकादेशका कथा जस्तै छन् । सन्तोषीलाई पनि आफ्नो भोगाई संसारका मानिसका भन्दा फरक लाग्छन् । सन्तोषीका श्रीमान् सुवास साउदी गएको १ वर्षमात्र भएको थियो । भोजपुरको कुदाक काउले स्थायी घर भएका सुवास मोरङमा बसाईं सर्दाको साढे सात लाख रुपैयाँ ऋण तिर्नका लागि २०७१ सालमा साउदी उडेका थिए । सुवास साउदीमा हेभी हुण्डाई कम्पनीमा काम गर्थे । उनको काम र कमाई राम्रो
बिदेशमा रहेका नेपालीकाेलागि खुशीकाे खबर, नेपाल फाेन गर्दा कम पैसा लाग्ने ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको इन्टरकनेक्सन शुल्क घटाउने तयारी शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न टेलिकम कम्पनीको अन्तराष्ट्रिय गेटवेमार्फत आउने टेलिफोन कलको शुल्कलाई नियमन गरेर घटाउने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणले यसको लागि आन्तरिकरुपमा अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले विभिन्न मुलुकमा रहेको अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको इन्टरकनेक्सन शुल्क र प्रकृयाहरुको बारेमा अध्ययन भईरहेको भन्दै नेपालमा पनि यसबारे पुन छलफल शुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले इन्टरनेशनल इनकमिङ कल इन्टरकनेक्सन चार्ज कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं, छिटै सम्बन्धित कम्पनीहरुसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नेछौं,’ निर्देशक स्थापितले क्लिकमाण्डूलाई भने । उनकाअनुसार करिब १ वर्षअघि प्राधिकरणले परामर्शदाता सुनिल जाकिबन्जाद्धारा गराईएको अध्ययनको आधारमा निर्णय प्रकृया अगाडि बढाउनेछ । ‘हामी ४ देखि ५ वर्षमा यसको शुल्कलाई १ रुपैयाँ ८० पैसामा झार्ने गरि प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने । ‘हामी ४ देखि ५ वर्षमा यसको शुल्कलाई १ रुपैयाँ ८० पैसामा झार्ने गरि प्रयास गरिरहेका छौं,’ अब चाँडै नै यो विषयमा टेलिकम कम्पनीहरुसँग छलफल गरिने स्थापितले जानकारी दिए । यस्तो शुल्क घटेपछि विदेशबाट नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क कम हुनेछ । प्राधिकरणले हाल इन्टरकनेक्सन निर्देशिका २०६५ को आधारमा टेलिकम कम्पनीहरुलाई नै अन्तराष्ट्रिय कलको इन्टरकनेक्सन शुल्क निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । सो निर्देशिकाअनुसार अन्तराष्ट्रिय आगमन करमा इन्टरनेशनल
बन्द भएको DV चिट्ठा फेरी खुल्यो, के के छ नयाँ नियममा ?
याे न्यूज पढे पछि धेरै सेयर गरिदिनुहाेला । पहिला भरेकाले फेरी भर्ने माैका पाउन । असोज १८ बाट खुलेको डिभी २३ गते देखि बन्द भएको थियो । सरोबरमा समस्या आएको भन्दै बन्द भएको डीभी फेरि खुल्ने भएको हो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासले पनि इडिभिको वेभसाइटमा प्राविधिक समस्याका कारणले बन्द भएको इडिभी २०१९ को दर्ता अवधि पुन सुचारु भएको जनाएको छ । अमेरिकाले यसअघि असोज १८ बाट २३ गतेसम्म इडिभी भरेकाको सवै प्रकृया रद्द भएको भन्दै पुन भर्न आह्वान गरेको छ । उक्त समयमा डिभी भरेकाले यो सूचना जारी भएसँगै पुन डिभी भर्नु पर्ने भएको हो । नेपालका लागि अमेरिकी दुतावासले आज बुधबार १८ अक्टोबर साझ ९ ः ४५ बजेपछि इडिभी भर्न मिल्ने जनाएको छ । दूतावासका अनुसार आगामी मंसिर महिनाको ६ गतेसम्म डिभी भर्न सकिने छ । त्यसका लागि डिभी भर्ने वेभसाइटमा गएर भर्न सकिने छ । दूतावासले यसअघि खोलिएको इडिभिमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै क्षमा याचना गरेको छ । इडिभी अमेरिका जाने सवैभन्दा सहज माध्य हो । इडिभि परेका व्यक्तिलाई अमेरिका जान पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर पहिलो चरणमा चिठ्ठी आएपनि दोस्रो चरणमा कन्फर्मेशन लेटर नआएको खण्डमा भने अमेरिका जान पाइने छैन । डिभी भर्दा कुनै शुल्न नलाग्ने दूतावासले जनाएको छ । तर , नेपालका अधिकांश डिभी भर्ने
काठमाडौँ । सुजता आउट हुने भन्ने कुरा कार्यक्रम छायंकन हुने बित्तिकै सामाजिक संजालमा केही व्यक्तिहरुले दावी गरेका थिए भने कति पयले सुजता आउट हुन्छ भनेर समाचार समेत तयारी बनाएर राखेका थिए । सामाजिक संजाल फेसबुक र युट्युवमा कतिपयले कार्यक्रम आउनु भन्दा अघि नै सुजता आउट भन्ने खुलासा गरेका थिए । यसको अर्थ के बुझीन्छ भने सुजता आउट भन्ने खबर कार्यक्रम छायंकनकै क्रममा बाहिर आएको देखिन्छ । नेपाल आईडलबाट सुजता आउट हुनेकुरा कार्यक्रम आउनु भन्दा अघि नै बाहिर आएको थियो । आखिर कस्ले ग¥यो त लिक ? सामाजिक संजाल भएका पोस्टले आम दर्शकलाई कोआउट हुन्छ भन्ने अड्कल गर्न सहज बनायो । सुजता आउट भएको कुरा कार्यक्रम प्रशारण हुन अघि नै बाहिर आएपछि एपीवानका निर्देशक सुरेश पौडेलले फेसबुकमा आफ्नो स्टाटस लेख्दै भनेका छन् ‘काम गर्दा कहिलेकाही भुलबस त्रुटी भईहाल्छ, त्यसबाट दर्शकलाई असुबिधा नहुनु पर्ने थियो । तर हिजो नेपाल आईडलमा भएको त्रुटीमा क्षमाप्रार्थी छु’ । हेरौं कस्ले चुहावट ग¥र्यो रिजल्ट ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवाली बर्खास्त
काठमाडाैँ : सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हाे । ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले गत हप्ता उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ज्ञवालीले बुधबार १२ पृष्ठ स्पष्टीकरण बुझाउँदै आफूले काम गरेको तर अन्य मन्त्रालयको असहयोगका कारण पुनर्निर्माण ढिलाइ भएको बताएका थिए। सरकारले अर्को सीईओ आजै नियुक्त गर्ने र दुबै निर्णयलाई एकसाथ सार्बजनिक गर्ने समझदारी भएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बताएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणका सीईओले काम गर्न नसकेको घाम झै छर्लङ्ग रहेको बताए । साथै उनले आजै नयाँ सीईओ नियुक्त हुने जानकारी दिए । तर, कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने खुलाएनन् ।
बेइजिङ : चीनले सन् २०१७ का लागि ‘नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यसलाई यस वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमण तयारीको रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्ने वर्ष चीनले सम्बन्धित देशमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ । चीनले केही दिनअघि नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई यसबारे जानकारी दिएको थियो । मंगलबार चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चाइना नेसनल टुरिजम एडमिनिस्ट्रेसनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक चाङ लिचोङसँग भेट गरी ‘नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम २०१७’ घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । ‘चीनको यो कदमले नेपालमा पर्यटकको संख्या सन् २०१७ मा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ,’ पौड्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाली दूतावासले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एक वर्षमा ८० हजार चिनियाँ पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण सन् २०१६ मा करिब ८० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१४ मा १ लाख २८ हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा गएका थिए । सन् २०१५ मा यो संख्या ६६ हजार थियो । साहसिक पर्यटनमा जान चिनियाँ युवाका लागि नेपाल अद्वितीय गन्तव्य भएको भन्दै सो सन्देश सामाजिक विज्ञापन, अनलाइन मिडिया तथा पर्यटक सम्बन्धित प्रकाशनहरूमा प्रचार–प्रसार गरिदिन पौडेलले महानिर्देशक चाङसँग आग्रह गरेका थिए । चाङले सन् २०१६ को मेमा विश्व पर्यटन सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेका परियोजनाका लागि नेपालले
दाउरा बेचेर विद्यालयको पढाइ
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ बंकमा रहेको उदय उच्च माविमा कक्षा–८ मा अध्ययनरत १४ वर्षीय रामकृष्ण चौधरी हरेक दिन विद्यालय समय सकिएपछि दाउरा सङ्कलन गरेर झलारी बजारमा बिक्रीका लागि आउने गर्छन् । स्थानीय मुक्त कमैया शिविरमा आश्रय लिँदै आएका चौधरी नजिकैका सामुदायिक वन, सडक छेउछाउ र नदीले बगाएर ल्याएका दाउरा सङ्कलन गरेर साइकलको सहारामा झलारी, कलुवापुर बजारमा बिक्री गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो । “स्कुलबाट आएर दाउरा बिक्री गर्न गएन भने स्कुलको पढाइ खर्च चलाउनै सकिँदैन ।” चौधरीले भने,“घरको अवस्था नाजुक भएकाले नै मैले दाउरा बेच्नु परेको हो ।” रामकृष्ण चौधरी जस्तै बंक र वनहरा क्षेत्रमा मुक्त कमैया, बाढीपीडित बस्तीका बालबालिकाको दैनिकी अध्ययनसँगै दाउरा सङ्कलन र बिक्री गर्नु बनेको छ । त्यसैगरी झलारीपिपलाडी–७ सिमलफाँटा आरक्ष विस्थापित बस्तीका दर्जनौँ बालबालिकाको दैनिकी पनि दाउरा बेचेर आयआर्जन गर्नु नै हो । आरक्ष र सामुदायिक वन क्षेत्रमा कडाइ गरिएपछि ती दाउरा बेचेर पढाइ खर्च जोहो गर्ने बालबालिका भने समस्यामा छन् । यसरी यहाँको कृष्णपुर र झलारीपिपलाडी नगरपालिकाका विपन्न समुदायका बालबालिका दाउरा बेचेर पढाइ खर्चको जोहो गर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । बंकस्थित शिविरका अर्का किशोर नन्दकिशोर रानाले पनि फुर्सदको समयमा दाउरा सङ्कलन गरेर बिक्री गरिरहेको बताए । उनले झलारी बजारमा एउटा दाउराको भारीको व्यापारीले रु १५० देखि २०० सम्म दिने गरेको बताए । “दाउरा बेचेर स्कुल
भारतबाट आयातित विद्युत् सोझै काठमाडौंमा
भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौं ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको हेटौँडा–कुलेखानी–मातातीर्थ प्रसारण लाइन मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । हेटौँडा–कुलेखानी दोस्रो स्यूचाटार १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन चार्ज हुनेबित्तिकै भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सहज हुने भएको छ । आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले मकवानपुर जिल्लाको चौकीटोलदेखि कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् आयोजना हुँदै काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको प्रसारण लाइन मङ्गलबार चार्ज गरिने जानकारी दिए । विसं २०६८ बाट सुरु भएको सो प्रसारण लाइन मुनि पर्ने जग्गा धनीले मुआब्जा एवम् क्षतिपूर्ति माग्दै लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । विसं २०४३ सालमा नै कुलेखानी दोस्रोको विद्युत् राजधानी ल्याउन निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनले दायाँ बायाँ नौ–नौ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइसकेको थियो । मकवानपुरको चौकीटोल, काठमाडौंको तत्कालीन मातातीर्थ र स्यूचाटार गाविसले घर तथा आवास बनाउन अनुमति दिएका कारण प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या पर्दै आएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को माग बढ्दै गएपछि आयोजनाले एकल फेजमा रहेका प्रसारण लाइनलाई दोहोरो बनाउने तयारी गर्दा स्थानीयवासीले चर्को विरोध गर्दै अवरोध गरेपछि विस्तार कार्य रोकिएको थियो । ‘मङ्गलबार हामी प्रसारण लाइन चार्ज गर्दै छौँ, अब भारतबाट आयात भएको विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सहज हुने विश्वास लिएका छौँ,’ आयोजना प्रमुख सिल्वालले भने। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मात्रै आयोजनाले रु एक करोड ८४ लाख क्षतिपूर्ति १९ घरपरिवारलाई प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा